Nyakuyanika muviri wake ooneswa moto	Friday, 19 April 2013 12:42	naMuchaneta Chimuka MURUME wekuChitungwiza wekuda kupona nechimhandara mumawoko akaigochera pautsi apo akabatwa nemhosva yekupindira muvakidzani wake mumba achibva abatikidzwa achiita izvi.
Mwana akafa abaiwa nebanga Friday, 19 April 2013 12:41	neMunyori weKwayedzaMWANA wekuBinga wemakore matatu okuberekwa anonzi akafa mushure mekuzvibaya nebanga raaiva akabata apo akapunzika. Tsaona iyi yakaitika zuva rodoka musi wa5 Kubvumbi kwaSabhuku Gali, kwaShe Pashu. Read more...
‘Wakadyiswa zvemupitikoti’. . .'Dai wakatsvaga mukadzi akanaka kundidarika kwete ‘chidhukunyende’	Friday, 19 April 2013 12:39	naDaphne Machiri MUKADZI wekutizwa nemurume achinogara neshamwarikadzi akaudza dare kuti murume uyu aive akadyiswa mupfuhwira wakabva mupitikoti.
Zvidhakwa zvakabirwa zvakakotsira	Friday, 19 April 2013 12:37	naMuchaneta ChimukaMBAVHA yekuChitungwiza, yekuita katsika kekubira zvidhakwa ichicheka homwe dzavo, yakazozviruza zvichitevera kutongerwa kwayakaitwa kunodya refovhoro nedare reko.Mutongi wedare reChitungwiza Magistrates’ Courts Nomsa Sabarauta akapa Abisha Katongomara (22) wepanhamba 3644 Unit D, Seke chirango chekugara mujeri kwegore.
Akafa arumwa negarwe Friday, 19 April 2013 12:33	neMunyori weKwayedzaMUTAMBO wekutuhwinha waiitwa nevamwe vana vadiki kwaShe Tsengwe, kuChiredzi wakazopera zvisina kunaka apo mumwe wavo akarumwa negarwe akafa. Tsaona iyi yakaitika masikati nemusi wa8 Kubvumbi murwizi Runde, kuChilonga.
VAKAGOCHWA KUMASOWE	Friday, 19 April 2013 12:28	naMuchaneta Chimuka MUKURU wechechi yepositori yeTrue Gospel Apostolic Faith Church kuChitungwiza anonzi akatuma
Vadzidzisi vanodawo kugara ‘tatata’	Friday, 19 April 2013 12:26	naDaphne MachiriSANGANO rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association (Zimta) rinoti riri kushushikana zvikuru nematambudzikiro ari kusangana nevarairidzi mubasa ravo ayo anosanganisira kushaya pekugara nezvifambiso.
Vakuru vezvikoro vakaroveswa pasi	Friday, 19 April 2013 12:12	VAKURU vezvikoro vatatu zvekuMasvingo vakadzingwa basa, vamwe vana vachiri kuferefetwa nenyaya dzekusashandisa mari dzechikoro nemazvo.Pane mashoko anoti zvimwe zvikoro zviri mudunhu iri zvinogona kusanganawo netsekwende yehuwori iyi.
Mazita ane zvaanoreva	Friday, 19 April 2013 12:10	naTicha DangaCHISHONA chedu chinokoshesa mazita nekuti vakuru vairatidza kushora nekurumbidza munhu kubudikidza nezita ravaipa mabasa aainge achiita. Ndiko kusaka vanonyora mabhuku vainzi vana nyanduri nekuti vaioneka vari nyanzvi mukuumba chiitiko namazwi.
Shasha dzedzidzo dzichapembedzwa	Friday, 19 April 2013 12:04	naDaphne Machiri BAZI redzidzo, mitambo netsika rinoti riri mushishi kugadzirira mutambo weHarare Provincial Merit Awards apo pachange pachipihwa mibairo kuvana, vadzidzisi nezvikoro zvakadadisa mubvunzo dzegore rapera.
Koshesai rusununguko: Gumbo	Friday, 19 April 2013 11:57	neMunyori weKwayedzaRUSUNUNGUKO rweZimbabwe haruna kuuya zvedambe asi nekudeuka kweropa izvo veruzhinji munyika vanofanira kucherechedza pamwe nekuzvikoshesa.Mashoko aya akataurwa naCde Rugare Gumbo, vanove mukushi wemashoko mubato reZanu-PF, svondo rino apo nyika iri mumhemberero dzezuva rekuwana kuzvitongwa Read more...
‘Zivai kukosha kwerusununguko’	Friday, 19 April 2013 11:56	naShamiso KufaruwengaVECHIDIKI vemuZimbabwe vanofanira kuziva kukosha kwerusununguko rwenyika nokuti haina kuuya nyore asi kuti pane ropa rakadeuka uye zvaida kuzvipira.Mashoko aya akataurwa svondo rapera nemukuru wesangano reZimbabwe Youth Action Group, VaLawrance Manyezu, kuBuhera uko vaiva mushishi kugadzirira bira
« Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End »	Page 10 of 146	Search	Sponsored Links